CounterParty စျေး - အွန်လိုင်း XCP ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CounterParty (XCP)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CounterParty (XCP) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CounterParty ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 772 339.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CounterParty တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CounterParty များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CounterPartyXCP သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.17CounterPartyXCP သို့ ယူရိုEUR€0.995CounterPartyXCP သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.898CounterPartyXCP သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.07CounterPartyXCP သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr10.58CounterPartyXCP သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.7.41CounterPartyXCP သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč26.17CounterPartyXCP သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.39CounterPartyXCP သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.57CounterPartyXCP သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.64CounterPartyXCP သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$26.24CounterPartyXCP သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$9.08CounterPartyXCP သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$6.37CounterPartyXCP သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹87.93CounterPartyXCP သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.197.94CounterPartyXCP သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.61CounterPartyXCP သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.77CounterPartyXCP သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿36.59CounterPartyXCP သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥8.17CounterPartyXCP သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥124.17CounterPartyXCP သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1393.78CounterPartyXCP သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦453.42CounterPartyXCP သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽86.4CounterPartyXCP သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴32.49
CounterPartyXCP သို့ BitcoinBTC0.0001 CounterPartyXCP သို့ EthereumETH0.00297 CounterPartyXCP သို့ LitecoinLTC0.0203 CounterPartyXCP သို့ DigitalCashDASH0.012 CounterPartyXCP သို့ MoneroXMR0.0125 CounterPartyXCP သို့ NxtNXT82.64 CounterPartyXCP သို့ Ethereum ClassicETC0.168 CounterPartyXCP သို့ DogecoinDOGE333.32 CounterPartyXCP သို့ ZCashZEC0.0123 CounterPartyXCP သို့ BitsharesBTS45.12 CounterPartyXCP သို့ DigiByteDGB40.23 CounterPartyXCP သို့ RippleXRP3.97 CounterPartyXCP သို့ BitcoinDarkBTCD0.0399 CounterPartyXCP သို့ PeerCoinPPC3.9 CounterPartyXCP သို့ CraigsCoinCRAIG527.19 CounterPartyXCP သို့ BitstakeXBS49.26 CounterPartyXCP သို့ PayCoinXPY20.19 CounterPartyXCP သို့ ProsperCoinPRC144.92 CounterPartyXCP သို့ YbCoinYBC0.000621 CounterPartyXCP သို့ DarkKushDANK370.98 CounterPartyXCP သို့ GiveCoinGIVE2504.18 CounterPartyXCP သို့ KoboCoinKOBO259.14 CounterPartyXCP သို့ DarkTokenDT1.08 CounterPartyXCP သို့ CETUS CoinCETI3338.85
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 05:30:03 +0000.